inkampani concierge British Quintessentially yakha yacht usayizi ezinkulukazi esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Cruises kuphela elite okuthwala ebhodini.
Amakhasimende bazokwazi ukuhamba emhlabeni futhi uvakashele izenzakalo edume kakhulu emhlabeni, isibonelo, Cannes Film Festival ne Grand Prix e Monaco. Futhi ebhodini izobanjelwa mega-party nge star abadlali.
Mayelana ngendiza yokuqala, ehlelelwe umhla 2019-2020 GG., Quintessentially Omunye touted njengoba "ngobukhulu elintantayo yangasese ubulungu club emhlabeni." Ukubhuka indawo ibhodi kuyoba ngo isimemo kuphela. Lokhu umkhumbi - samuntu eziningana isithombe nekutfutfuka kwelizinga yacht yesimanje. Umklamo isikisela ukuthi yaseshashalazini ugibelile futhi yokudlela esikhulu.
Quintessentially Omunye abiza esingamakhilogremu angu-250. Lo mkhumbi kuyoba yacht esikhulu kunazo zonke emhlabeni, ogama ubude 220 amamitha.
I yacht 40 amamitha isikhathi eside kunaleso Azzam, okumanje umkhumbi ngobukhulu yalolu hlobo.
Quintessentially Omunye kuyoba "ezintantayo ubulungu yangasese club esikhulu kunazo zonke emhlabeni," kuhlanganise ihholo amaqembu, yokudlela kanye ibha.
Izivakashi bayoba nethuba ndima spa zokwelapha, kanye ukufinyelela studio ukuqina, Boutique amahhotela okunethezeka zokuhlala zangasese.
Lo mkhumbi inama i yaseshashalazini ugibelile, ibhizinisi isikhungo, umtapo wezincwadi, indawo yezitolo ezinkulu kanye yokudlela yisakhiwo sodumo Le neWolseley.
Esikhathini reception bubuhle ezitebhisini imperial elakhiwa ngo isitayela 1920. Futhi ebhodini kukhona ibha oyster.
Okudingayo for ubulungu?
Ubulungu Quintessentially Omunye okwamanje eyenziwa kuphela isimemo esikhethekile, okuyinto ingatholakala ngemuva kokuphumelela ikomidi Ukukhetha. Isimemo ukunikeza ukufinyelela esikebheni futhi unikeze inombolo nights khulula ehhotela Boutique ebhodini.
Yamadivayisi 12 embukisweni eyisitezi amafulethi esisogwini onezitezi engenhla. izindleko zabo zokhahlamba kusuka kwezigidi ezingu-8 kuya kwezingu-12-euro. zabanikazi kuyoba abantu abacebile kakhulu.
Okunethezeka Beach Club inikeza izivakashi nge service siqu inceku, Mixology, ukuxuba cocktail nge-champagne, kanye DJs umhlali.
Ngo Kloster Marina has a beach club, yokudlela, yacht port. Esenikwe ithuba amanzi ezemidlalo.
Kubathandi yobumfihlo lalineseluleko ukufinyelela solarium yangasese okuyokunika kwangijabulisa futhi aziphumulele.
Lapho indiza yokuqala?
Quintessentially Omunye uhlela ukwenza cruise zawo kuqala ekuphileni 2019 noma 2020.
Kodwa kufanele balinde ukubona ukuthi lo mkhumbi zikanokusho ukumemele.
Ukwelashwa detraleks - ukwelashwa okuphumelelayo of varicose emithanjeni kwanoma iyiphi kwasendaweni
Indlela ukubeka imijovo ukuze izilwane kwesokudla?
Ukolo ogazingiwe: ikhalori 100 igramu ngamunye
Udokotela Inhlupheko imaski yezandla zabo. Kanjani kute wente imaskhi udokotela isifo?
Cavatina kuyinto: izibonelo Cavatina adumile